Inona no endrik'ireo artista sary Google Doodles? | Famoronana an-tserasera
Mpanakanto inona no mamolavola doodles an'i Google?
Pablo Gondar | | mpanakanto, maro
Mpanakanto sary inona no mamolavola ilay doodles de Google? Ity dia fanontaniana iray izay nanontaniantsika rehetra tamin'ny fotoana hafa nandritra ny fampiasana ity mpitety tranonkala ity tamin'ny tenantsika tamin'ny fotoana sasany tamin'ny fiainantsika. Isaky ny miditra ao isika Google Ny zavatra voalohany hitantsika dia sary lehibe izay misy ny sary famantarana tany am-boalohany Google amin'ny sary amin'ny karazany rehetra izay miova arakaraka ny asehon'io andro io.
Hitanay daholo ireo doodles isan'andro nefa fantatsika ve hoe iza no namorona azy ireo? misy mpanakanto ao ambadik'izany asa rehetra izany inona no sary an-tsaina vaovao doodles hampiaiky volana antsika rehefa miditra Google. Ny famoronana an'ny Google tsy misy fetra ary toa tsy izany koa ny an'ny mpanakanto nanomboka tamin'ny taona 2000 dia namorona sary mahafinaritra sy sary an-tsaina tsy misy farany izy hiaraka amin'ny sary famantarana Google.
Efa niditra tao amin'ny motera fikarohana Google ary faly izahay nahita ny sary izay niaraka tamin'ny sary famantarana, fomba hafa hisarihana ny mpampiasa satria manambatra ny famoronana amin'ny fampahalalana betsaka doodles de Google maneho daty sy tarehimarika manan-tantara.
1 Iza no mandrafitra ny Google Doodles?
2 Oviana no teraka ny doodles Google?
3 Firy ny doodles ao?
4 Fa maninona no miasa be ny Google doodles?
5 Alefaso ny dokoteranareo mba hisolo tena!
Iza no mandrafitra ny Doodles de Google?
Ny karazana isan-karazany daty sy hetsika lehibe aseho an-tsary amin'ny fampifangaroana ny sary famantarana Google miaraka amin'ny fanoharana isan-karazany, na dia vao haingana aza lalao sy horonan-tsary mifandray. Google Tsy isalasalana fa ny fanavaozana sy ny famoronana no mpisava lalana, fa iza no ao ambadik'ireo sary manaitra ireo? ao ambadik'ireo asa rehetra ireo dia ny mpanakanto Dennis Hwang, mandray anjara ity mpanakanto ity nanomboka namorona ny voalohany doodles for Google nanome ny heviny tao amin'izy ireo tsirairay avy. Androany, miaraka amin'ny fitomboana niainan'ny orinasa dia vita io asa io ekipa mpanao sary antsoina hoe doodler.
Oviana no teraka ny doodles Google?
ny doodles de Google nipoitra "nilalao" izy ireo ny mpanorina ny Google nanomboka nilalao izy ireo tamin'ny taona 1998 miaraka amin'ny sary famantarana orinasa manampy saribakoly ao ambadiky ny "o" faharoa amin'ny sary famantarana. Roa taona taty aoriana tamin'ny 2000 nangataka tamin'ny mpanakanto Dennis Hwang izy ireo mba hamorona sary hiarahana amin'ny sary famantarana. Amin'izao fotoana izao ny doodles de Google dia namboarin'i asan'ny ekipa izay misy vondron'olona manapa-kevitra ny amin'izay hetsika aseho an-tsary. Izay nanomboka ho zavatra kely dia kely noforonin'olon-tokana dia lasa zavatra lehibe noforonin'ny zavatra rehetra ekipa matihanina mamorona.
Afaka mahita ilay mpanakanto amin'ity horonantsary ity isika Dennis Hwang mamorona iray amin'ireo doodles de Google. Raha tsy misy fisalasalana, asa tsy mampino ary rendrarendra ho anay mpampiasa ny mahita ny fomba fiasan'ity matihanina endrika ity.
Firy doodles misy ve?
Rehefa avy niasa nandritra ny taona maro dia mahazatra ny manana karazana doodles Pero Fantatrao ve hoe firy no noforonina hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 2000 ka hatramin'izao? mino na tsy misy ankehitriny 2000 doodles, 2ooo fomba hanehoana hetsika manan-danja amin'ny alàlan'ny fanoharana, asa famoronana tsy mampino.
Raha be fitiavana ianao doodles ny famirapiratana sy ny endrika tsy azonao adino galeriany an'ny Google aiza no ahitanao ny rehetra doodles noforonina hatramin'ny niandohan'ny orinasa ka hatramin'izao. Ny galeriana dia misy motera fikarohana aiza no hijerena doodles amin'ny fomba milamina daty na zava-nitranga manan-danja.
Rehefa miditra ny galeriana isika ary tsindrio a sarin'ny afaka mahazo fampahalalana mahaliana kokoa isika momba izany sarin'ny simenitra sy ny hetsika aseho azy. Mahaliana izany satria afaka mampahafantatra ny tenantsika momba ny karazan-javatra rehetra isika Mandritra izany fotoana izany no ankafizinay ny maka sary an-tsaina ny famoronana sary.
Fa maninona no miasa be ny Google doodles?
ny doodles de Google miasa be izy ireo satria amin'ny lafiny iray manintona izy ireo ny fahazoan'ny mpampiasa mankafy mahita azy ary na oviana na mifanerasera aminy amin'ny lalao kely, etsy ankilany hitantsika ny ampahany mampahalala izay mahazo vaovao momba ny hetsika lehibe iray ny mpampiasa.
Manintona ny maso
Raha toa isika mpampiasa dia miatrika a sarin'ny de Google izay milaza amintsika an-tsary momba ny lohahevitra iray izay mahaliana antsika hisarika antsika ary te hahalala bebe kokoa momba an'io lohahevitra io.
Ao amin'ny sarin'ny izay hitantsika etsy ambany dia asehoy anay ny andro fifidianana tany Espana tamin'ny fomba tena tsara ary mahafinaritra milalao miaraka amin'ireo litera misy ny sary famantarana, Amin'ity tranga ity dia ambany ny haavon'ny famolavolana (realisme) ny litera, kanefa na izany aza dia tsapantsika fa momba izany Google mahita antsipiriany kely momba ny litera sy ny lokon'ny orinasa.
Amin'ny fahatongavan'ireo fotoana vaovao ny maha-zava-dehibe ny traikefan'ny mpampiasa ary ny fifandraisana Google Manolotra fomba vaovao hanehoana ny azy ireo aho doodles. Androany isika dia afaka mahita doodles mifindra (horonan-tsary) ary koa mifampiresaka amin'ny alàlan'ny lalao kely andraisan'ny mpampiasa anjara, misy mpampiasa maro izay nandany ora maro nilalao ny lalao /doodles naroson'i Google.
Afaka mahita horonan-tsary kely miaraka amin'ny sasany isika doodles Animated de Google.
Tapa-kevitra doodles de Google dia niteraka fahatezerana mafy ka ny sasany YouTubers nanao horonantsary izy ireo milalao ny iray amin'ireny minigames Google.
Alefaso ny anao DODODE A GOOGLE !
Fantatrao ve izany azonao atao alefaso ny doodles a Google? Raha mpanakanto na mpamorona ianao dia tianao izany mandray anjara amin'ity tolo-kevitry ny Google ny sisa hataonao dia mandefa mailaka miaraka amin'ny volavolanao sarin'ny. Aza adino ny manonona sy manazava ny sarin'ny mba hahafantarana izay atolotry ny tolo-kevitrao. Mirary anao ho tsara vintana!. Alefaso amin'ity adiresy ity ny soso-kevitrao: proposals@google.com
Tsy misy fisalasalana Google dia nanisy marika a teo aloha sy aoriany amin'ny Internet na amin'ny sehatra IT, ary koa ny fanavaozana sy ny famoronana. Maka fanahy alaivo sary an-tsaina ireo fahagagana vaovao rehetra izay nomanin'ireo isika Google. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba Google azonao jerena ve ity fanadihadiana kely amin'ny fomba ahoana ny mpiasa ao Google.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Mpanakanto inona no mamolavola doodles an'i Google?
Fitaovana miloko tokony hananan'ny mpamorona endrika tsara rehetra
Ahoana ny fomba hamoronana ny vokatra "Andy Warhol"